China - Zimbabwe: Chinese President visit - Voice of America
Mpalakazi 04, 2015
Ekhuluma emhlanganweni wamazwe ezwekazi leAfrica le China eJohannesburg, ngoLwesihlanu, umongameli Xi Jinpin wethule izithembiso ezimbalwa ezigoqela uncedo olubiza amabillion angamatshumi ayisithupha amadollar-$60-billion lwenhlelo zentuthuko ezimbalwa kanye lokuxolela amanye izikhwelede zawo kilo.
Umongameli Robert Mugabe weZimbabwe ekhuluma emhlanganweni phakathi kwe China lamazwe awezwekazi leAfrica uthe ubudlewano lele China le Africa bumqotho njalo abugxilanga kwezokwemba kuphela, wancoma eleChina ngokusekela inhlelo zokuthuthukisa izwekazi labensundu.
UMongameli Xi Jinping weChina Unika Amazwe eAfrica i$60 Billion
UMongameli Xi uvele wayitshaya esikhonkosini wendlala amacebo abanzi okuphathisa izwekazi leAfrica.
Mpalakazi 03, 2015
Amabandla Aphikisayo Athi Akuhluzwe Izivumelwano zeZimbabwe leChina
UMnumzana Tendai Biti labanye basole kakhulu ukungaphumi egcekeni kukahulumende ngalezi zivumelwano, okumenze wakhuthaza uzulu ukuthi engemukeli izivumelwano lezi.
Mpalakazi 02, 2015
Umkamongameli weleChina lowe Zimbabwe bethekelela indawo egcinelwa intandane eHarare
Umkamongameli weZimbabwe uNkosikazi Grace Mugabe, wamukela umkamongameli weChina uNkosikazi Peng Liyu endaweni egcinelwa intandane eHarare, ngoLwesibili. UPeng, oze lomkakhe umongameli Xi Jinping, elizweni wanikeza imphahla yokusebenzisa kwezemidlalo laseskolweni ekhuthaza ukunakekelwa kwentandane
Umkhokheli weleChina ugqhiba uhambo lwakhe eZimbabwe ngemva kokusayina izivumelwano zezigidi lezigidi zamadollar
Umongameli Robert Mugabe lomunye wakhe wele China uXi Jinping Babambana izandla njengesitshengiselo sobungane babo
Kambe ele Zimbabwe lizancedakala na? ngohambo lukamongameli Xi Pinjing lokwethekelela lelo lizwe
China - Zimbabwe: Historic Presidential Visit
Umongameli Xi Jingling efika kwele Zimbabwe
UMongameli XI Jinping weChina Uhlangabezwa Ngosiko Lwesintu
China-Zimbabwe: UMongameli XI Jinping Ufika eZimbabwe